JanaSandeshगण्डकी प्रदेश सरकारकाे लाेकप्रिय याेजना एक अर्ब निर्व्याजी ऋण बाँड्ने, क-कसले पाउँछन् ऋण ? - JanaSandesh
JanaSandesh > Headline News > गण्डकी प्रदेश सरकारकाे लाेकप्रिय याेजना एक अर्ब निर्व्याजी ऋण बाँड्ने, क-कसले पाउँछन् ऋण ?
२०७७ माघ ७ गते १२:५८ मा प्रकाशित
यो कोषबाट व्यवसायीले तीन वर्षका लागि ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । त्यसको ब्याज सरकारले तिर्नेछ । ऋण दिने बैंकले राष्ट्र बैंकबाट तीनरतीन महिनामा ब्याजबापतको रकम पाउनेछन् ।
प्रदेश सरकारले सूचना निकालेपछि प्रदेशभित्र शाखा भएका १८ वाणिज्य बैंकका चार सय ८० मध्ये जुनसुकैमा निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । निवेदन दिने अन्तिम मिति पछिको २२ दिनभित्र निवेदकले ऋण पाउनेरनपाउने जानकारी पाउनेछन् । तीन वर्षभित्र व्यवसायीले सावा नतिरे बैंकले प्रचलित ब्याजदर ऋणीबाटै लिन पाउने व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा उल्लेख छ ।
निर्धारित समयसम्म कर्जा नतिरे ऋणीको नाम कालोसूचीमा राखिने राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख भट्टराईले बताए । ऋण नतिरे खाता बन्द, चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा प्रतिबन्ध, प्रदेश सरकारबाट पाउने अरू सुविधामा बन्देज र राहदानी रोक्का हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । ऋणको सही सदुपयोग भएरनभएको अनुगमन र त्यसको प्रभावकारिता राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्नेछ ।
(हस्तकला, चित्रकला एवं सौगातका सामान बनाउने
(परम्परागत धातुको मूर्ति बनाउने
(कृषि र दुग्ध पदार्थबाट वस्तु उत्पादन गर्ने
(घरेलु हाते तान प्रयोग गरेर कपडा बुन्ने
(जुत्ता चप्पल बनाउने, पोते बुन्ने, चाउमिन, जाम, गुडिया, अगरबत्ती बनाउने
(पशुपंक्षी, मौरी र माछा पाल्ने
(स्थानीय खाद्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण गर्ने आदि ।
(ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ आदि
(साना होटल, होमस्टे र बार
(सांस्कृतिक मनोरन्जन दिने व्यवसाय
(बुट्टा भर्ने र पोसाक बनाउने
(ट्रेकिङ सामग्री बेच्ने पसल
(पर्यटकीय किताब बेच्ने
(पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ, स्पा आदी
(ट्याक्सी, बस, ट्रक, ट्र्याक्टर, रिक्सा र जिप
(शैक्षिक सामग्रीको कारोबार गर्ने
रघुगंगाका कोरोना संक्रमित विरामीको उपचारमा १ लाख १३ हजार बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग